Qabridahar iyo munaasabada 10 jirsatay ee 29ka hidaar. - Cakaara News
Qabridahar iyo munaasabada 10 jirsatay ee 29ka hidaar.
Qabridahar(CN) arbaca, 9, December, 2015, Magaalada qabridahar ee xarunta gobolka qoraxay ayaa si heer sare ah looga xusay munaasabada xuska 10aad ee 29ka hidaar, munaabadadaasi oo ahayd mid si balaadhan u soo agaasimeen maamulka gobolka, maamulka magaalada qabridahar iyo qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalada qabridahar.
Waxaana ka soo qaybgalay munaasabadan masuuliyiinta ugu saraysa gobolka, masuuliyiinta maamulka magaalada, odayaasha, ugaasyada,salaadiinta , hooyooyinka, dhalinyarada, ciidamada difaaca qaranka qaybga gobolka qoraxay, saraakiisha ciidanka booliska gaarka ah iyo waliba ardayda isguulada kala duwan ee maamulka magaalada qabridahar wax ka barata.
Waxaana ugu horayntii ka hadlay munaasabadan gudoomiyaha gobolka qoraxay mudane yuusuf aadan yuusuf wuxuuna oo sharax dheer ka bixiyay soonyaalka taariikheed ee ay munaasabadani ku suntan tahay iyo guulaha waawayn ee ay qoomiyadaha iyo shucuubta itoobiya u soo haysay maalintani.
Qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada qabridahar ayaa si qoto dheer uga warbixiyay sida ay munaasabadani ugu wayntahay qalbiyada shacabka kuwaasi oo sheegay in ay tahay maalintii shacabka ka dulqaaday heeryadii uu saaray kalidii taliyihii dhiigyo cabka ahaa ee dhergiga iyo kuwii ka horeeyay balse maanta dhamaan qoomiyadaha iyo shucuubta itoobiya ku xusayaan horumar dhinaca kasta leh.